माधव नेपालनिकटका नेता कमारा होइनन् : रघुजी पन्त
विचार शिलापत्र बहस
रघुजी पन्त काठमाडौं, २४ भदौ
दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपा एमाले सबैभन्दा अग्र स्थानमा पर्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका सबै बैठक नियमित बस्थे र त्यहाँ नेतृत्वको कडा आलोचना हुन्थ्यो । पार्टी सञ्चालन पद्धति पूरै लोकतान्त्रिक थियो । जिल्ला, केन्द्र सबैमा समयमै अधिवेशन हुन्थ्यो र निर्वाचनबाटै नयाँ नेता चुनिन्थे । भूमिगत काल जति बेला वामपन्थी राजनीति गरिरहेको राज्यले थाहा पायो भने जेल जानुपर्ने अवस्था थियो, त्यस्तो बेला पनि हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत नै पार्टी चलाएका थियौं ।
सोभियत संघलाई कुनै बेला हामी सामाजिक साम्राज्यवाद भन्थ्यौं । तर पछि सामाजिक साम्राज्यवाद भन्ने कि समाजवाद भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भएपछि हामीले विस्तारित बैठक नै गर्नुपर्‍यो । अगुवा कार्यकर्ताहरूसहितको विस्तारित बैठकले कतिपय कमीकजोरीका बाबजुद पनि सोभियत संघ समाजवाद नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि पार्टीले पनि त्यही लाइन लियो ।
२०४६ को तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा माओत्सेतुङ विचारधारा छोड्ने कि अँगाल्ने भन्नेमा ठूलो बहस भयो । त्यस विषयमा महाधिवेशनमा भोटिङ नै भयो । माओत्सेतुङ विचारधारा राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा अमृत बोहोरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, अशोक राईलगायत हुनुहुन्थ्यो । तर, बहुमतले माओत्सेतुङ विचारधारालाई अध्ययनको विषय बनाएर पार्टीको आधिकारिक लाइन नबनाए पनि हुन्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो ।
यसरी सिरियस विचारधारात्मक विषयमा पनि र संगठनात्मक विषयमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल हुने पार्टी नेकपा एमाले नै थियो । तर, त्यो प्रक्रिया नवौं महाधिवेशनसँगै सुस्तायो । अहिले त तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट नेकपा बनिसकेपछि छलफलको वातावरण हरायो । कार्यकर्ताले चाहेको जस्तो पार्टी हुन सकेको छैन । पूर्वमाओवादीले पनि पार्टी संगठन भनेको एमालेको जस्तो हुनुपर्छ भन्दै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो । अहिलेको एकता प्रक्रियाका कारण पार्टी संगठन प्रायः ठप्पजस्तै छ । भर्खरै कार्यविभाजन भएको छ ।
कार्यविभाजनको तयारी गर्दा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको छुट्टै बैठक बस्यो । यसरी पार्टी संगठनमा मात्रै होइन भावनात्मक रूपमा पनि एक भइसकेको छैन । अहिलेको एकता प्रक्रियाका कारण नेकपामा लोकतान्त्रिक संस्कार धेरै पछि पर्‍यो । भर्खरै जिल्ला कमिटिहरू बनेका छन् । अब ढिलोमा एक वर्षभित्र जिल्लाले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व टुंग्याउन समय तोक्नुपर्छ । संगठनात्मक कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिकरण हो । तर, यो प्रक्रिया अहिले अवरूद्ध छ ।
महाधिवेशन हुँदा सर्वसम्मत या निर्वाचनबाट भए पनि कमिटिहरू त बन्छन् । निर्वाचित कमिटी हौं भन्ने उनीहरूलाई अधिकार हुन्छ । यसरी प्रदेश हुँदै पार्टी महाधिवेशनमा जान सहज हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एकता प्रक्रियाका कारण पछाडि परेको छ । यसले पार्टीको विचार निर्माणमा सुस्तता ल्यायो । जस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको सदस्य म पनि थिएँ । नारायणकाजी र मैले अन्तिमसम्म जुटेर फाइनल गरेको हो ।
माधव नेपालको संयोजकत्वको रहेको सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन महिनौंसम्म थन्केर बस्यो । दुई नेताको कुरा नमिल्दा महिनौंसम्म थन्किने स्थिति छ । स्थायी कमिटि हुँदै सचिवालयले पास गरेको सो प्रतिवेदनलाई दुई अध्यक्षले केही भए सुझावसहित फाइनल गरौं भनेको त्यो अलपत्र पर्‍यो । राजनीतिक प्रतिवेदन छैन कार्यकर्ताहरू अलमलमा छन् । यो भनेको हाम्रो वैचारिक, संगठनात्मक, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबै अवरूद्ध भयो । यसलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
इतिहासः कतिपय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरूमै भत्काइएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको एउटा महाधिवेशनमा डिल्लीरमण रेग्मी सभापति निर्वाचित हुनुभयो । बीचमा बीपी कोइराला जेलबाट छुटिसकेपछि अर्को महाधिवेशन नगरीकनै अब उपरान्त पार्टीको नेतृत्व मै लिन्छु भन्दै आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । संगठनहरूको इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक महाधिवेशन हो । एउटा महाधिवेशनले अर्को महाधिवेशनसम्म कि त पर्खनुपर्थ्याे, कि त भइरहेको सभापतिले राजीनामा गरेको भए नेतृत्वको अर्को विकल्पको खोजी हुन सक्थ्यो । यसकारण दलभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बिग्रिएको शुरूवातदेखि नै हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्दा पहिलो महाधिवेशनदेखि नै लोकतान्त्रिकरण प्रक्रिया शुरू भएको छ । स्थापनाकालदेखि पहिलो महाधिवेशनमा नपुग्दै पहिलो मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष बन्नुभयो । पहिलो महाधिवेशनमा अधिकारी र दोस्रोमा केशरजंग रायमाझीमा नेतृत्वमा चुनिनुभयो । जबकि पार्टीमा विचार पुष्पलालको पास भएर आइरहेको थियो । कार्यकर्तामा विचारको आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण विचार एउटाको र नेता अर्को बन्ने स्थितिले पार्टीमा समस्या आयो ।
तेस्रो महाधिवेशनसम्म पार्टी एकीकृत भए पनि त्यसपछि भने पार्टीमा विभाजन आयो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हामी हौं भनेर कांग्रेसले दाबी गरे पनि वास्तवमा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने काम त कम्युनिस्ट पार्टीले नै शुरू गरेको हो । पाँचौ महाधिवेशनमै हामीले दुई/तीनवटै विचार समूहलाई भोटिङ गराएर कुन विचार सही हो भनेर विचार स्थापित गर्ने काम एमालेले शुरू गरेको हो ।
गुटबन्दीको शिकारमा सबै पार्टी परेका छन् । नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीले पनि त्यो समस्या भोगिरहेको छ । गुटकै कारणका पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वस्थ हुन पाएको छैन । विचार, क्षमताका आधारमा नेता छान्नुभन्दा पनि कुन गुट आफू छु र कसलाई जिताउने भन्ने कुुरा नै प्रमुख भयो ।
कुनै गुटमा नलाग्ने, सिर्जनशील युवाहरू तथा अलि ऊर्जावान् कार्यकर्ताको पार्टीमा मूल्याङ्कन नै नहुने अवस्था छ । कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नभएर कांग्रेस र अन्य पार्टीमा पनि सकेसम्म अधिवेशन टार्ने, विधि प्रक्रिया देखाए पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने अवस्था छ । कांग्रेस सबैजसो भ्रातृ संगठनमा नेता छैनन् । समयमा अधिवेशन भएर नयाँ नेता आउनु भनेको दुर्लभजस्तै भएको छ । लोकतान्त्रिक हुँ भनेर दाबी गर्ने नेताहरूमा पनि सकेसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान छ ।
लोकतन्त्र र विचार
हाम्रो समाज पनि बहसमा पिछडिएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा पनि बहस भएको जस्तो लाग्दैन । खुला समय भएपछि मिडिया बहस शुरू भएको त देखिन्छ तर त्यो स्वस्थ छैन । आफूलाई लागेको विचार नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने भर्खरमात्रै चलन शुरू भएको छ ।
जस्तो अहिलेको संविधानले समाजवादोन्मुख व्यवस्था भनेको छ । तर, कस्तो समाजवाद भनेको हो ? यो विषयमा छलफल भएको जस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले बुझेको समाजवाद हो कि हामी कम्युनिस्टले बुझेको समाजवादी व्यवस्था हो ? या यो संविधानले निर्क्याेल गरेको समाजवाद के हो ? यसको आर्थिक सम्बन्ध, सामरिक सम्बन्ध र यसका न्यूनतम सामाजिक मूल्य र मान्यता के हुन् ? यसको राजनीतिक, साँस्कृतिक अवधारणा के हो ? यो समाजवादमा पुग्ने कार्यक्रमहरू के के हुन् ? यो विषयमा खोई बहस भएको ? यो विषयमा बहस गर्न ढिलाइ भयो । यो पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको एउटा रूप हो । तर दलका अगुवाहरूले यसलाई निषेध गरेका छन् ।
कांग्रेस यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन । कुनै तात्कालिक एजेण्डालाई लिएर राजनीति हुने भयो । युरोपमा हेर्नुस्, कतै ‘कमेडियन’ ले चुनाव जितेको छ, कतै सिनेमा हिरोले चुनाव जितेको छ । विचार, नीति, कार्यक्रम त्यसका सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमका आधारमा पार्टी बन्ने हो । अहिले त विचार त कहीँ छैन । फेसबुकका आधारमा जनमत बन्ने स्थिति आयो । सोभियत संघको विगठन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि संसारको राजनीति विचारविहीन भएको छ । यो भनेको राजनीतिले जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न नसकेको सत्य पनि हो ।
जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मान्छेले फेसबुक, ट्वीटर र सिनेमामा नायकहरू खोज्नु थाले । डिजटल र सञ्चार माध्यामको विकासले मानिसको चिन्तन, मानिसको विचार निर्माण राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्रमा आक्रमण गरेको छ । यसरी मानिस मुद्दामा गहिरिएर पनि गएको छैन । त्यसैले यी प्रवृत्तिले समाजलाई पनि विचार विहीन बनायो । यी सबै विषयमा दलहरूमा गम्भीर छलफल हुनु जरूरी छ ।
आम जनमानसमा आलोचित तर निर्वाचनमा सधैं जित्ने
यसको जिम्मेवार पार्टी कार्यकर्ता हुन् । बाहिरीरूपमा आलोचना बढिरहने चुनावमा जितिरहने यो लोकतन्त्रमा हुँदैन । पार्टीको गुटमा भएपछि जसरी नेतालाई जिताउने, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरिदिने काम त कार्यकताले पनि गरिरहेका छन् ।
यसको उदाहरण नेकपा एमालेले नै दिएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले हारिसकेपछि नैतिकताको जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्नुभयो । कतिपय साथीहरूले यसो नगर्नुस् पार्टीमा तपाईको खाँचो छभन्दा पनि उहाँले मान्नुभएन ।
प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने कुराको हामीले आत्मालोचना गरेका छौं । कांग्रेस हाम्रो गल्ती भयो भनेको कतै पनि छैन । हामीले महाधिवेशनमा जाँदा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने कुरा गलत भयो कि भनेर सच्याइएको छ । हामी दशाैं महाधिवेशनमा जाँदा पनि यो बीचमा पार्टी कसरी चल्यो ? नेकपाको सरकारले कस्तो काम गर्‍यो ? यि विषयहरू हामीले महाधिवेशनमा गम्भीर ढंगले छलफल चलाउँछौं ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्ध यस्ता विषयलाई समीक्षा गर्ने वामपन्थीहरू मात्रै हुन् । गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्ने पनि वामपन्थीहरू नै हुन् । निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेपछि त्यो नेताले अर्को निर्वाचनसम्म पर्खनु राम्रो हो । संसारको राजनीतिमा प्रमुख नेताहरू उपनिर्वाचनमा मार्फत पनि संसदमा जाने प्रचलन छ । तर, माधव नेपालले चुनाव हारिसकेपछि फेरि संसदमा जानुभयो । हामीले विरोध गर्‍यौं । तर, तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बैठकमा प्रस्ताव नै ल्याउनुभयो । संविधान बनाउने बेला भएको छ । तपाई जस्तो मानिस बाहिर बसेर हुँदैन । संसदमै भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सबैतिरबाट माग आयो । यदि त्यसो हो भने हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्षसँग लिखित प्रस्ताव नै माग गर्‍यौं । माओवादीको लिखित चिट्ठी नै आएपछि उहाँ बाध्य हुनुभएको हो । लोकतन्त्रमा जनताको अगाडि प्रतिबद्धता गरेपछि त्यो पूरा हुनुपर्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी कसरी लोकतान्त्रिक ?
जनवादी केन्द्रीयतालाई देखाएर कसैले कम्युनिस्ट पार्टी कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने गरेका छन् । जनवादी केन्द्रियता लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको एउटा मान्यता हो । त्यो भनेको पार्टीको कमिटीमा हरेकलाई आआफ्ना विचारमा खुलेर छलफल गर्न देऊ, छलफलपछि सर्वसम्मतिमा निर्णय भयो भने भइहाल्यो भएन भने त्यसको विधिबाट निर्णय गर भनेको हो । बहुमतका आधारमा पारित भएको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ । अल्पमतमा परेको विचार पनि सुरक्षित हुन्छ । अल्पमतमा यदि कोही एक्लै भयो र मेरो विचार पनि तलसम्म जान पाउनुपर्छ भनेर माग्यो भने उहाँहरूको धारणा यस्तो थियो भनेर अन्तर पार्टी निर्देशनमा लेखेर पठाइदिने समेत गरेको छ । कतिपय अवस्था आफ्ना कुुरा तल लान चाहनेलाई पनि बोल्न मिल्ने गरी हामी निर्णय गरेका छौं । त्यो जनवादी केन्द्रीयता कसरी लोकतन्त्र विरोधी भयो ?
केन्द्रीयता त्यतिबेला लागू हुन्छ, जब पार्टीमा अराजकता फैलिन्छ । बहुमतको आधारमा निर्णय हुने तर म कुरा मान्दिनँ, म मेरै निर्णय लागू गर्छु भन्दा पार्टीले स्ट्रङ निर्णय त लिन्छ । नत्र त पार्टी पनि चल्दैन ।
पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी मत
लामोसमयसम्म केपी ओलीलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेता भनियो । एमालेको इतिहासमा सातौं र आठौं महाधिवेशनमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो । पार्टीभित्र विचारको छलफल, कमिटिको छलफल गराउन काममा माधव नेपाल नै लाग्नुभयो । केपी जी अल्पमतमा पर्दा पनि नेपालले ओलीका कुरा मानेर जानुभएको छ । बहुमत जसले प्राप्त गर्छ उसले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ । मूल नेता भइसकेपछि पनि तपाई गुटकै मात्र नेता भएपछि कसरी पार्टी चल्छ ? अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो ।
आफूलाई सपोर्ट गर्नेको मात्र हित हेर्ने हो भने कसरी पार्टी चल्छ ? अहिलेको नेकपाभित्रको समस्या यही हो । दुवै अध्यक्षले यो गल्ती गर्नुभएको छ । अहिले जो माधव नेपालसँग लागेका छन् ति सबै नेपालका कमारा त होइनन् नि ? माधव नेपालका सबै कुुरा मन परेर जिन्दावाद भन्दै हिँडेका होइनन् ? केही कुुरा माधव नेपालको राम्रो लागेर उहाँसँग लागेका होलान् । तर केपी ओलीले माधव नेपालको भन्दा राम्रो व्यवहार देखाउनुभयो भने त गुट नै रहँदैन नि । तर नेतृत्वले जब लाखा र पाखा व्यवहार गर्छ अनि गुट जन्मिन्छ । पार्टीभित्र गुट बन्नका कारण पनि हुन्छन् गुट समाप्त पार्ने आधारहरू पनि हुन्छन् । प्रश्न तपाई के गर्ने ?
पार्टीमा सामूहिक अपनत्व
माधव नेपालको विशेषता छलफल गराउने र राय सल्लाह लिने खालको छ । जस्तो माओवादीसँग वार्ता गर्दा खास मान्छेलाई थाहा नदिईकन बामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई वार्ता गर्न रोल्पा पठाउनु भयो । त्यो बेला केपीजीले विरोध गर्नुभयो । हामीले पनि यो एक्कासि के गरेको केही थाहा नै नदिईकन भन्ने लाग्यो । तर, मुख्य नेताले त्यस्तो कहिलेकाहीँ गर्नु पनि पर्छ । माधव नेपाल मुख्य नेता केपीजीले फरक मत राख्दा माधव नेपालले सधैं मान्नुभएको छ । छैटौं महाधिवेशनमा पार्टी फुट्यो । यसको कारण खोजौं, दोष अरूलाई मात्र नदिऊँ, हाम्रो पनि केही दोष छ कि समीक्षा गरौं भन्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले गाली खाएको थिएँ । सातौमा पनि केपीजीसँग अन्तरविरोध चर्कियो । मैले नै नेपाललाई तपाईं महासचिव हुँदा पार्टी फुटेको छ । फेरि अर्को क्षति होला होस पुर्‍याउनुस् भनेर सम्झाएको छु । त्यसपछि केपीजीको प्रस्ताव गरेका महाधिवेशनमा हारेका वाचश्पति देवकोटा, पृथ्वीसुब्बा गुरूङलगायत १० जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएको हो । मुख्य नेताले त पार्टीलाई युनिफाइड गर्ने र लचिलो हुने हो । यसले पार्टीलाई मात्रै बचाउँदैन । आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास पनि देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६, १०:००:००